Global Voices teny Malagasy » Hong Kong : Koropaka fa tsy ampy ny vovo-dronono ho an-jazakely · Global Voices teny Malagasy » Print
Hong Kong : Koropaka fa tsy ampy ny vovo-dronono ho an-jazakely
Voadika ny 18 Marsa 2011 5:00 GMT 1	 · Mpanoratra Winne Ko Nandika (fr) i Elodie Belbeoc'h, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Shina, Fitantanam-pitondrana, Sakafo, Tanora
Nanomboka ny volana desambra 2010, niatrika ny tsy fahampian'ny ronono vovony ho an-jazakely i Hong Kong noho ireo mpividy avy any Shina mividy rononon-jaza betsaka ao Hong Kong ary manangona izany mba hampiasaina rehefa tsy miasa amin'ny Taombaovao Shinoa.
Nangataka fanadihadina avy amin'ny governemanta ny ray aman-dreny hongkongais, nanolo-kevitra izy ireo amin'ny fametrahana haba amin'ny fanondranana ronono vovony mba hanakanana ireo mpanao trafika izay mitatitra ny ronono hovarotany any ivelan'ny sisintany.
Ny ray aman-dreny rehetra ao na Hong Kong na ao Shina kaontinantaly, maniry ronono vovony madio ho an-jazakely. Sarin'i Flickr k.Akagami.
Fanafintohinana sy trafika
Efa nanomboka tamin'ny raharaha momba ny ronono voapozina tamin'ny mélanine [amin'ny teny anglisy]tamin'ny taona 2008 ny antony lehibe nahatonga ny tsy fahampian'ny ronono vovony. Nanomboka hatreo, nipoitra matetika tao Shina ny raharaha manodidina ny fiarovana ny ronono.
Ohatra vao haingana ny nahitana taha-pitomboan'ny tsiri-panentana (hormone) ao anaty rononon-jazakely  [amin'ny teny frantsay] tamin'ny taona 2010 ary ny raharaha tamin'ny volana febroary taona 2011 momba ny fifindran'ny akora-dronono amin'ny taharo shimika mampisy homamiadana ampiasaina amin'ny fitsaboana hoditra [amin'ny teny anglisy].
Mba hiarovana ny zaza amin'ny ronono voapozina, dia mividy ronono vovony vita avy any ivelany amin'ny fomba rehetra azo atao ireo Shinoa saranga antonony ao Shina kaontinantaly. Misy ireo misafidy handeha ho an'i Hong Kong mihitsy mba hividy vokatra avy amin'ny ronono ho an-jazakely.
Manararaotra izany ireo mpanao trafika mba hitadiavany tombony ka mikarakara mafy ny fandefasana ireo ronono vovony eny ampitan'ny sisintany amin'ny alalan'ny “mpandeha matihanina” mba hivarotra izany indray. Nitatitra ireo haino aman-jery fa ireo mpividy ronono ao Shina kaontinantaly dia mandoa 50HKD [4,6 euros] fanampiny isaky ny ronono amin'ny boaty iray.
Fihetsem-pon'ireo ray aman-dreny hongkongey
Manoloana ny tsy fahampian'ny rononon-jaza, nanao fanangonan-tsonia ireo ray aman-dreny efa tezitra ao Hong Kong ary niantso mba hampiharina amin'ny volana janoary 2011 ny fampidirana haba amin'ny fivoahan'ny ronono vovony ho an-jazakely. fionali3721  [amin'nyteny shinoa] no mpanentana momba ny fanangonan-tsonia ao amin'ny takelaka fiadian-kevitra Baby Kingdom [ny fanjakan'ny zazakely]:
Nanery ny governemanta koa ireo mpikambana ao amin'ny takelaka fiadian-kevitra BK mba hametraka haba amin'ny fivoahan'ny ronono vovony any ivelany. Te hanaitra ireo mponina ihany koa izahay amin'io olàna io. Ireo olona izay te-hanohana anay, mamelà hafatra, azafady, ary asio teny hoe “manohana aho”.
Tokony omena alalana hitondra ronono vovony iray boaty fotsiny ireo olona tsirairay mandao an'i [Hong Kong] ho any Shina kaontinantaly, ary tokony efa voatomboka ny boaty. Raha tsy izany, tokony mandoa lamandy avo folo heny [ny sandan'ny ronono vovony]. Mino izahay fa izany fepetra izany dia mety hahakivy ireo mpanao trafika ary hampiverina amin'ny laoniny indray ny famatsiana ny ronono vovony ao Hong Kong. Niteraka fiakaram-bidin-javatra ireo mpanao trafika (ny vidin'ny rononon-jaza) ao Hong Kong, mbola miampy ny andraikitra fanampiny amin'ny fandaniana isan'andro ny mponina ao Hong Kong.
Manan-jo hiaro ny zon'ny ZAZAKELY ny vahoaka.
Etsy andaniny, mahatsiaro tsy manana hery sy malahelo ireo ray aman-dreny ao Hongkong manoloana ny tsy fahampian'ny ronono, etsy ankilany, mahatsapa fiaraha-miory amin”ireo mitovy miny ao Shina kaontinantaly koa izy ireo izay voa mafy amin'ny tsy fandraisan'andraikitry ny governemanta. XsQsMe  ao amin'ny serasera fiadian-kevitra Review33 nitsikera :
Miray fo amin'ireo ray aman-dreny ao an-tanibe [kaontinantaly] izahay, nefa koa miahiahy ihany sao misy fiantraikany amin'ny fiainanay izany. Safidy roa mahasanganehana izany.
Mampalahelo izay tsy izy ny miaina eo ambanin'izany rafitra politika izany: mandany vola amina miliara ho an'ny lalao olaimpika sy ny tetikasa [sinoa nasionaly] ho an'ny habakabaka, mamokatra akora tsy izy , atody namboarina  tamin'ny SoPhone  (nifototra tamin'ny iPhone) , nefa tsy nahomby ny fiompiana omby mba [ hamokatra] ronono ka mamela ny zanany hijaly. Ny firenena an-dalam-pandrosoana dia hijanona foana ho firenena an-dalam-pandrosoana !
Valintenin'ireo ray aman-dreny ao Shina kaontinantaly
Fantatra fa ny ronono dia vokatra ilain'ny zazakely isan'andro, manohy mizara vaovao sy paikady amin'ny fomba hividianana ronono madio ho an'ny zaza ny ray aman-dreny ao Shina kaontinantaly . Green tea Chestnut Cake  ao Guangzhou Moms dia nampandre ireo mpamaky gazety amin'ny fametrahana ny anjara fividianana ronono ao Hong Kong sy Macau:
Nitatitra ny fahalalam-baovao androany fa eo am-pametrahana ny fetra amin'ny fividianana ronono vovony i Hong Kong sy i Macau! Tsy safidy mahomby ny haba alaina amin'ny ronono vovony. Mbola afaka mividy ronono vovony isika eny amin'ny ampitantsisintany, fa tokony hitandrina fotsiny amin'ny habetsahany !
Nahare aho fa ny marika Meiji dia efa tsy misy intsony koa eto amin'ny fokontany, voafetra ny famatsiana [ireo marika] Meadjohnson sy Friso, soa ihany fa hanana tahiry vaovao i Friso amin'ny herinandro ho avy.
Manambara ny ahiahiny i Wenxi Mom  :
Indrisy, tsy afaka mampiasa ny vola azonay izahay mba hividianana vokatra madio sy mahasalama ho an'ny ankizy.
Nampanantena ny hampitombina ny famatsiana ny ronono vovony ho an-jazakely ny governemanta ao Hong Kong, fa mihamafy ny fifamaliana eo amin'ny ray aman-dreny ao Shina kaontinantaly sy ao Hong Kong.
Ny herinandro lasa, tamin'ny 9 martsa 2011, olona dimy -telo avy any Shina kontinantaly ary roa avy any Hong Kong – no voasambotra noho ny ady momba ny ronono vovony ao Hong Kong  .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/03/18/14914/
 raharaha momba ny ronono voapozina tamin'ny mélanine: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/2008-special-coverage/poisonous-milk-scandal-2008
 taha-pitomboan'ny tsiri-panentana (hormone) ao anaty rononon-jazakely: https://fr.globalvoicesonline.org/2010/09/02/42137/
 fifindran'ny akora-dronono amin'ny taharo shimika mampisy homamiadana ampiasaina amin'ny fitsaboana hoditra : http://www.theepochtimes.com/n2/china/leather-milk-surfaces-in-china-51637.html
 atody namboarina: http://www.chinahush.com/2009/04/24/how-to-identify-fake-chicken-eggs/
 Green tea Chestnut Cake: http://www.gzmama.com/thread-2031142-1-1.html
 voasambotra noho ny ady momba ny ronono vovony ao Hong Kong: http://hk.news.yahoo.com/article/110309/4/n45s.html